आजबाट ३ दिनसम्म वर्षा र हावाहुरीको सम्भावना, कहाँ-कहाँ? - Everest Dainik - News from Nepal
आजबाट ३ दिनसम्म वर्षा र हावाहुरीको सम्भावना, कहाँ-कहाँ?
काठमाडौं, चैत २२ । आज (शुक्रबार) काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभर मौसम बदली भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसविद्का अुनसार आज दिउँसो पूर्वी र मध्य क्षेत्रका केही तथा पश्चिमी भेगका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना छ।
यस्तै तराईका सीमाना र पश्चिमी पहाडका थोरै स्थानमा हल्का हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली भेगमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना छ। हावाहुरी आउने सम्भावना रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाइ होसियारी अपनाउन मौसमविद्ले सुझाब दिएका छन्।
यस्तो छ तीन दिनको मौसम अनुमानः
चैत २२ गते (शुक्रबार)
दिउँसोः देशभरका धेरैजसो भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली रहनेछ । पूर्वी तथा मध्य भूभागका केही स्थान, पश्चिमका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना देखिन्छ। तराईका सिमानामा र पश्चिमी पहाडका थोरै स्थानमा हल्का हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना छ।
याे पनि पढ्नुस आज पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा हावाहुरीको सम्भावना
रातिः देशको पूर्वी र मध्य भूभागलगायत पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। पूर्वी तथा मध्य भूभागका थोरै स्थानमा, पश्चिमी भूभागका १र२ स्थानमा मेघ गर्जनसाथ हल्कादेखि मध्यमसम्मको वर्षा हुने सम्भावना छ। पूर्वी र मध्य तराईका सिमानामा हल्का हावाहुरी चल्ने चल्ने सम्भावना छ। । यस्तै उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना देखिन्छ।
याे पनि पढ्नुस पश्चिमी वायुले बदली, तर पानी पर्दैन मौसमविद्
चैत २३ गते (शनिबार)ः
दिउँसोः देशको अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्णसम्म बदली रहनेछ। देशका केही स्थानमा मेघ गर्जनका साथ हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना देखिन्छ। बिहानको समयमा तराईका सिमानामा हल्का हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। र उच्च हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यमसम्म हिमपात हुने सम्भावना देखिन्छ।
रातिः देशका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्णसम्म बदली रहनेछ। केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना देखिन्छ। र तराईका सिमानामा हल्का हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ । उच्च हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यमसम्म हिमपात हुने सम्भावना देखिन्छ।
याे पनि पढ्नुस देशभर मौसममा बदलीः मध्य र पूर्वका कतिपय ठाउँमा मेघगर्जन र हावाहुरीसहित पानी पर्ने सम्भावना
चैत २४ गते (आइतबार)ः
दिउँसोः देशभरका धेरैजसो भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली रहनेछ ।पूर्वी तथा मध्य भूभागका थोरै स्थानमा, पश्चिमका १/२ स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना देखिन्छ। पश्चिमी पहाडका थोरै स्थानमा हल्का हावाहुरी चल्ने सम्भावना पनि छ।
रातिः देशको अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशको पूर्वी भागका १/२ स्थानमा मेघ गर्जनका साथ हल्का वर्षाको सम्भावना देखिन्छ। पश्चिम र मध्य तराईका सिमानामा हल्का हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। यो समाचार आजको नेपाल खबरले छापेको छ ।